Ọganihu Hormone na Bangkok. Iji hormone nke na-eto eto na Thailand
Ọganihu Hormone na Bangkok. Jiri hormone nke na-eto eto na Thailand
Site HGH Thailand November 29, 2017
Taa, m ga-achọ ịkọ banyere ọgwụ maka ọtụtụ ndị kpuchiri
otu ihe mgbochi nke nzuzo. A na - akpọ ọgwụ ọgwụ a - hormone na - eto eto.
Mmiri hormone (hormone growth, STH, HGH, somatotropin, somatropin) bụ
ihe mgbochi peptide nke na-eme ka ọkpụkpụ na-eme ka ọkpụkpụ gọọmentị dị na ya
n'egwuregwu maka ịmepụta ahụ ike. Ebu ụzọ kenye ya
na 1956. Enwere aha hormone growth ma ọ bụ somatotropin (site na Latin
akuko - aru) n'ihi na ndi na-eto eto o na eme ka acceleration of
uto na-eto eto, nke ka nke ukwuu n'ihi uto nke ọkpụkpụ tubular ogologo nke
A na-ewepụta hormone nke na-eto eto na pọọpọ gland na nzaghachi nye
akara nke hypothalamus. Ihe dị ka afọ iri abụọ, a
mmadụ na-ebelata mmepụta nke hormone ahụ site na ahụ. Aging nke
a na-ejikọta ahụ ahụ na ọkwa nke ịmalite ịmịpụta ọbara. Mgbe ahụ
ọ bụla afọ 10 ogo nke mmepụta nke hormone growth na-ada site na 15%.
Mkpụrụ hormone nke na-eto eto adịghị enwe esemokwu mmekọahụ. Ogo ya dị otu
maka ndị ikom na ndị inyom. N'agbanyeghi na iji ọgwụ ndi nwere
WADO (World Anti-Doping Organization) machibidoro hormone na-eto eto,
na Thailand, ọgwụ ndị a enweghị ohere.
Uru nke uto hormone dị ịrịba ama - ọ bụghị ọtụtụ
egwuregwu na-eri nri, peptides, ma ọ bụ ọbụna ndị na-agwọ ọrịa steroid. Ekwenyere ya
na hormone ahụ na-eto eto nwere mmetụta dị mma na ebe nchekwa, ọ na-agbanweghachi ya
usoro ịka nká ma mee ka anụ ahụ dị obere.
Ọzọkwa, uru ndị bụ isi bụ: nbelata abụba anụba, abawanye
na ngwakọta ahụ, belata ọnụ ọgụgụ nke mgbochi na mgbochi maka
mmụm n'ọdịnihu, mmụba ọkpụkpụ nke ọkpụkpụ na
ike nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
A na-akọ na ọ bụ Demi Moore, Robbie Williams na Madonna
ejiri ọgwụ mgbochi eme ihe, na Stallone ọbụna gafere iwu na-akwadoghị
njem nke nnukwu hormone site na Australia,
wetara iwu n'ụzọ iwu kwadoro na Thailand.
Ndị dọkịta mara mma na-eme ọgwụ na-eto eto na-ekwere na
ihe ize ndụ maka ndị Fans ya bụ naanị otu ihe - ịbanye n'ime ihe adịgboroja. Dị otú ahụ
ọgwụgwọ dị ọnụ ala, na ịzụrụ hormone na Intanet, e nwere
ihe ize ndụ nke ị nweta ihe na-anaghị adị mfe mgbe niile
Ọ bụ ezie na e nwere echiche ọzọ nke ndị nchọpụta na-atụ aro na
ihe ndi ozo nke ogwu a na-emebiga ya ókè. Na
na hormone ahụ na-eto eto pụrụ ọbụna imerụ ahụ ahụ ahụ.
Na nyocha ụfọdụ, HGH na-emetụta mmetụta ndị dị na ya, nke ọ bụ naanị
enweghị ike ikwasa. Dịka ọmụmaatụ, mmụba n'ime afo enweghị nkà mmụta sayensị
nkwenye. Nke a ga-ekwe omume na tiori naanị mgbe ijikọta HGH na
ndị steroid ma na-eri nri dị nnọọ ukwuu
Ọzọkwa, hormone nke na-eto eto anaghị emetụta ọkwa nke testosterone, libido
na inwe mmekọahụ, n'adịghị ka steroid. Mmiri hormone maka ụmụ nwoke bụ nnọọ ihe
echekwa na ọ bụ ebe dị anya. Na Thailand, a kwenyere na ya
na HGH na-akpata etuto ahụ, ma nke a emeelarị ka a tụlee ọmụmụ ihe ahụ. Ọ nwere ike
naanị na-akpalite mmepe ngwa ngwa nke ụbụrụ dị ugbu a (tupu
mmalite nke hormone na-eto eto ọ dị mkpa ka ọ gafere nyocha
ewepu mmepe nke usoro ndị a).
Mmepe nke mmetụta dị ịrịba ama mgbe ị na-eji ndị a tụrụ aro
enweghi ike ikpuchi ọgwụ nke hormone. Ọfọn, site n'ụzọ
banyere obere mmetụta, anyị nwere ike ikwu na ha na-adị mfe wepụ,
ọtụtụ na-enweghị ọgwụ ndị ọzọ.
N'ịgbaso nke a n'ozuzu ya, a pụrụ ịkatọ na hormone na-eto eto
bụ ọgwụ dị mma. Dị ka bodybuilders si Thailand, 88% nke ndị ahụ
ewere HGH weere ya ọgwụ dị irè. Ọzọkwa, 86% kwuru eziokwu
ike na-acha egbuke egbuke na uru na oke ahụ. Ọganihu na
79% kwuru ihe ngosi ike. N'otu oge ahụ, karịa 80% nke
ndị na-anabata ya na-anabata ngwa ngwa nke hormone. Akụkụ
Ọ bụ 23% nke ndị na-eme egwuregwu na-eji nwayọọ eme ihe
ọgwụ nke hormone. N'ụzọ bụ isi, isi ihe mgbochi ịbịakwute ha
ọ bụghị ihe ize ndụ, mana nnukwu ego na-enye obi ụtọ maka hormone growth.
Onye ọ bụla nke kpebiri ịmalite ịmalite uto homone kwesịrị iwe
lekọta ọ bụghị naanị maka ego zuru ezu (mgbe niile, hormone
eme ihe na iji oge ma ọ bụ jiri ya mee ihe na-adịghị ike), ma
nakwa banyere àgwà ngwaahịa nweta.